Maalin wanaagsan, dhamaan saaxiibadda ku taxan Shabakada wararka cayaaraha ee Laacib.so waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee shanta horyaal ee Yurub, maalintiisii Todobaad:
Liverpool ayaa udhadhaaqeysa inay kala soo saxiixato Riyad Mahrez dhigeeda Leicester City waxaana 26-sano jirkaan la filayaa inuu caafimaad u maro maanta oo Axad ah. [Bein Sports]
Reds ayaa waxay diyaarineysaa inay si deg deg ah ay kula soo wareegto bedelka Philippe Coutinho waxayna rabtaan inay lasoo saxiixato 22-sano jirka khadka dhexe uga dheela AS Monaco ee Thomas Lemar. [Liverpool Echo]
Arsenal ayaa waxay ku dhowdahay inay 25 Malyun ay ugala soo wareegto West Brom, daafaceeda 30-sano jirka ah ee Jonny Evans. [Sun on Sunday]
Mauricio Pellegrino macalinka kooxda Southampton ayaa sheegey inuu rabo inuu dib ulaga soo wareegto Arsenal garabka duula ee Theo Walcott oo 28-sano jir ah. [ESPN]
Macalinka Bayern Munich ee Jupp Heynckes ayaa meesha ka saarey in 30-sano jirkiisa dhaxda uga dheela ee Arturo Vidal uu bishaan Janaayo usoo wareegayo Chelsea [Mail on Sunday]
Madaxa fulinta ee Juventus ee Giuseppe Marotta, ayaa wuxuu sheegay inay ilgaar ah ay ku eegi doonaa xaalada 24-sano jirkooda reer Argentina ee Paulo Dybala, xili ay rabaan kooxo waa weyn. [Football Italia]
Manchester United makala lumi doonto Chelsea, wax tartan ah soo qaashadda 26-sano jirka Juve daafaca uga dheela ee Alex Sandro, waxayna heli karaan hadda. [Calciomercato.com iyo Manchester Evening News]
Macalinka Barca Oo Ka Warbixiyay Xaalada Dembele Iyo Hadii Uu Caawa Kusoo Bilaaban Karo
Riyad Mehraz oo Maanta Uu Tijaabada Caafimaadka U Marayo Liverpool